Resaky ny mpitsimpona akotry : very hevitra ny maro | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : very hevitra ny maro
Ny hoe very mpitahy dia efa ela no namoy fo ny momban’iny ny mponina, toy ny kamboty velon-dray tsy maintsy mionona ary mitsikaraka irery, nefa olona ihany ka maneho ny alahelony noho izany dia midongy nanapaka fihavanana amin’ny raharaha pôlitika. Mitranga ity ny sedra noho ny loza mananontanona amin’ny fielin’ny pesta. Samy feno ahiahy avokoa ny olona, nefa very hevitra tsy mahafantatra an’izay tokony ho ataony.
Hany fantatra ety anivon’ny fiarahamonina dia ny fanatonana tobi-pahasalamana raha misy tranga mampiahiahy eo amin’ny toe-pahasalamana. Ivelan’ny fitanisana isan’andro ny isan’ny marary sy maty noho io aretina io, dia ny fampaherezana ny vahoaka hanatonana toera-pitsaboana no hany fanentanan’ny fanjakana ? Samy miandry fotsiny an’izay fidonan’ny aretina izany ny mponina, fa tsy manan-katao ho fiarovana ny tenany na ho fisorohana ny fiparitahan’ny aretina ?
Ny mpitsabo aza anie dia tsy tena mahita ho lazaina rehefa mangataka fanafody ny olona. Tsy mbola mikotrika an’ilay aretina dia efa mihinana « antibiôtika », angamba anefa toy ny menaka ahoso-bato izany. Ireny karazana fanafody ireny, araka ny fahalalana azy dia tsy natao ho fiarovana ny fahatongan’aretina, toy ny vaksiny samihafa izany, fa fanafody fanasitranana ny aretina efa mikotrika. Toy izay koa ny famafazana na rano na vovo-panafody ho fanadiovana mialoha ny tontolo iainana, fahamalinana tsy mahavita fiarovana izany raha misy fidiran’ilay otrik’aretina eo amin’ireny tontolo nanaovana azy ireny.
Tsy ny dokotera sy ny mpitsabo no ampianarina an’
izany. Tsapan’izy ireo ankehitriny fa ny fomba fototra mikasika ny fiarovana mba tsy hiparitahan’ny aretina no tsy nampiharin’ny fitondrana. Araka ny fiheveran’izy ireo moa dia ny fifehezana an’ny fivezivezena ho any ivelan’
izay faritra nisy fitrangan’ny aretina no fepetra tsy maintsy raisina voalohany. Ao amin’ny faritra tratry ny voina no anaovana fanadiovana mahery vaika, sy fitilina ny olona rehetra sy fitsaboana arak’izay an’izay mitondra an’ilay otrik’aretina. Raha tsy izay fomba fiady izay no raisina dia hitohy amin’ny fanaovana fangala-piery toy izao ataony izao ny pesta.